Issim sheegay in la isir guurinayo Soomaalida Kililka Itoobiya (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 29, 2018 11:58 b 1
Ugaas Cabdisalan jaamac Faarax oo ka mid ah Isimada Puntland ayaa ka Hadlay dagaalka ka taagan Xadka Soomalida iyo Oromada ee dalka Ethopia ugaas ayaa ugu baqay maamulka DDSI inay Arintaas Hoos u Fiirshana Xaqiiqaa ka sheegaan dhibta Halkaa skka jirta .
Ugaas ayaa sheegay in la isir guurinayo Umad dhan oo Hlkaas dagan waasida u hadalka u dhigaye wuxuu baaqu diray inta Afka Soomaliga ku hadasha inay Arintaan u qumana oo ay waxa ay ka qaban karraan ay ka qabtaaan.
Cabdi Xakiin Xusein Xassan ayuu u waramay.
KU LAHAA INTA AFSOOMAALIGA KU HADASHA!.
OK,ADEEGSIGA WEERAHAASI WAA QALAD WHY? SOMALI KUMA HADALEE WAXAANU NAHAY SOOMAALI,
SOMALINIMADUNA MA AHA AF EE WAA DHIIG, HIDO, & ABTIRSIIN,